New – Page2– Muslim Book
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်Positive ဟုဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဘောလိဝုဒ် စတား”အမီတာဘဂျမ်း”
Mohamed Rahin | July 12, 2020
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်Positive ဟုဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဘောလိဝုဒ် စတား”အမီတာဘဂျမ်း” ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်Positive ဟုဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဘောလိဝုဒ် စတား”အမီတာဘဂျမ်း” ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်Positive ဟုဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဘောလိဝုဒ် စတား”အမီတာဘဂျမ်း” ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်Positive ဟုဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဘောလိဝုဒ် စတား”အမီတာဘဂျမ်း” ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်Positive ဟုဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဘောလိဝုဒ် စတား”အမီတာဘဂျမ်း” Credit, ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈPositive ဟုဝနျခံလိုကျတဲ့ ဘောလိဝုဒျ စတား”အမီတာဘဂမျြး” ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈPositive ဟုဝနျခံလိုကျတဲ့ ဘောလိဝုဒျ
ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် (၆) ခု အစိုးရခွင့်ပြုချက်ရရှိ
Mohamed Rahin | July 11, 2020
ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် (၆) ခု အစိုးရခွင့်ပြုချက်ရရှိ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ၀တ်ပြုရာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် (၆) ခု ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းခွင့်ပြုချက်ရရှိပါပြီ ၊ ကူညီ‌ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော အစိုးရအဖွဲ့နှင့် သာသနာရေး ဦးစီး ဌာနတို့အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ပြန်လည် ၀တ်ပြုခွင့်မရသေးသော မြို့နယ်များ ၊ ကျေးရွာများအနေနဲ့ မြို့နယ်တွင်းရှိ ဂေါပကများ စုရုံးပြီး အပေါ်စာတစ်စောင်ကို
အမရပူရမြို့မှ ရှေးဟောင်းအိုးတော်ဗလီကြီး ဗဒုံမင်းသည် ခရစ်သက္ကရဇ် (၁၇၈၃) ခုနှစ်မေလ(၁၂)ရက်နေ့တွင် ရတနာပူရအဝ (အင်းဝ) မြိုတော်ကို အမရပူရ ရွှေမြို့တော်သို့ပြောင်းရွှေ့ နန်းစိုက်တော်မူပါသည်။ Henry Yule ၏မှတ်တမ်းအရ အမရပူရမြိုတော်တွင်အိမ်ခြေ (၁၇၆၅၉) လူဦးရေ (၉၀၀၀၀) ခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရေးသားထားပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးများအပြင် တရုတ်၊ အာမေးနီးယန်း ၊ မဂို ၊ မွတ်စလင်များ (မူရင်းမှာ
မွန်ပြည်နယ် အစ္စလာမ်သာသနာ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီး၏ ဟဒီးဆ်အတန်းပြဆရာကြီး အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အမိန့်တော်ခံယူ
မွန်ပြည်နယ် အစ္စလာမ်သာသနာ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီး၏ ဟဒီးဆ်အတန်းပြဆရာကြီး အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အမိန့်တော်ခံယူ မွန်ပြည်နယ်၏ကြယ်တပွင့်ကြွေလွင့်သွားပါပြီ။ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ကျွဲခြံကုန်းရပ်နေဂျာမေအဟ် ဇွမီရီယာဟ် ကာစေ့မွလ်အိုလူးမ် အစ္စလာမ်သာသနာ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီး၏ ဟဒီးဆ်အတန်းပြဆရာကြီး ဟဇရသ်မောင်လာနာအမ်ဂျဒ်ဆွာဟိဗ်(ရဟေ့)သောကြာနေ့ မွန်းတည့်မတိုင်မီအလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်သခင်အမိန့်တော်ခံယူသွားပါသဖြင့်ဆရာသခင်ကြီး၏ မဂ်ဖွေရသ်အတွက်အထူးဒိုအာပြုပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင် ဆရာသခင်ကြီးအား ဂျန္နသွလ်ဖိရ်ဒေါက်စ် မှာမြှင့်မားသောအဆင့်အတန်းချီးမြှင့်တော်မူပါစေ။ အာမီးန် Credit, မှနျပွညျနယျ အစ်စလာမျသာသနာ့တက်ကသိုလျကြောငျးတျောကွီး၏ ဟဒီးဆျအတနျးပွဆရာကွီး အလ်လာဟျအသြှငျမွတျအမိနျ့တျောခံယူ မှနျပွညျနယျ၏ကွယျတပှငျ့ကွှလှေငျ့သှားပါပွီ။ မှနျပွညျနယျ မျောလမွိုငျမွို့
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို အကူအညီပေးဖို့ ကော်မတီဖွဲ့
Mohamed Rahin | July 8, 2020
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို အကူအညီပေးဖို့ ကော်မတီဖွဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ကူညီဖို့ ခွင့်တူညီမျှသော အောင်နိုင်ရေး ကော်မတီ (ယာယီ) ကို အဖွဲ့ဝင် ၁၆ ဦးနဲ့ မနေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ လူနည်းစု ကိုယ်စားပြု ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပါတီတစ်ခုခုကနေ
အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကူးပြောင်းပြီး ကုရ်အာန်ကျမ်းကို ​လေ့လာသင်ယူနေတဲ့ အာမေးနီးယန်းအမျိုးသမီး
Mohamed Rahin | July 6, 2020
အသက်၈၃မှ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကူးပြောင်းပြီး ကုရ်အာန်ကျမ်းကို ​လေ့လာသင်ယူနေတဲ့ အာမေးနီးယန်းအမျိုးသမီး တူရကီ အာမေနီးယား နယ်စပ်တွင်နေထိုင်တဲ့ တူရကီနိုင်ငံသား အာမေနီးယန်းလူမျိုးအမျိုးသမီးသည် အစ္စလာမ်က်ို ကူးပြောင်းပြီးကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို လေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်။ ယခုလို စိတ်ဓတ်မျိုးရှိသောဤအဖွားအိုအား အလ္လာဟ်ရှင်မြင့်မားသော အဆင့်တန်းချီးမြင့်ပေးတော်မူပါစေ။ တူရကီ အာမေနီးယား နယ်စပ်တွင်နေထိုင်တဲ့ တူရကီနိုင်ငံသား အာမေနီးယန်းလူမျိုးအမျိုးသမီးသည် အစ္စလာမ်က်ို ကူးပြောင်းပြီးကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို လေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်။ ယခုလို စိတ်ဓတ်မျိုးရှိသောဤအဖွားအိုအား
ကုရ်အာန်ကို အလွတ်အာဂုံဆောင်တဲ့ မျက်မမြင်ခလေးမလေးကို တူရကီသမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင် နန်းတော်သို့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ
Mohamed Rahin | July 5, 2020
ကုရ်အာန်ကို အလွတ်အာဂုံဆောင်တဲ့ မျက်မမြင်ခလေးမလေးကို တူရကီသမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင် နန်းတော်သို့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ကုရ်အာန်အလွတ်အာဂုံဆောင် မျက်မမြင်ခလေးမလေးကို တူရကီသမ္မတကြီး တွိုင့်ရစ်ဗ်အာဒိုဂန်ကိုယ်တိုင် သူ၏နန်းတော်ကြီးသို့ခေါ်ယူတွေ့ဆောင်ပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ပုံပါ။ Recep Tayyip Erdogan’s meeting with the blind girl who kept the holy Quran. MashaAllah ကုရ်အာန်အလွတ်အာဂုံဆောင် မျက်မမြင်ခလေးမလေးကို
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ စစ်တကောင်းမြို့ရှိ အရဗီအထက်တန်းကျောင်းတော်ကြီး၏ ဟာဒီးစ်ပြဆရာကြီး အလ္လာဟ် အသျှင့်မြတ်သခင်၏ အမိန့်တော်ခံယူ
Mohamed Rahin | July 4, 2020
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ စစ်တကောင်းမြို့ရှိ အရဗီအထက်တန်းကျောင်းတော်ကြီး၏ ဟာဒီးစ်ပြဆရာကြီး အလ္လာဟ် အသျှင့်မြတ်သခင်၏ အမိန့်တော်ခံယူ إنا لله وانا اليه راجعون موت العالم موت العالم ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ စစ်တကောင်းမြို့ရှိ ဂျမီယာ ဘာဘူနော်ဂါရ် အရဗီအထက်တန်းကျောင်းတော်ကြီး၏ ရှိုက်ခုလ်ဟာဒီးစ် ဟာဒီးစ်ပြဆရာကြီး ဟဇရဟ် မော်လနာ အလ်လာမဟ် အဘူလ်ကာလာမ်ဆပ်(ရဟ်) အလ္လာဟ်
အိန္ဒိယနိင်ငံ တမလ်နာယူပြည်နယ်မှ အူရ်ဒူ အရ်ဗီ အကျော်အမော်ပညာရှင်မော်လာနာ ဒေါက်တာ နေစာရ် အဟ်မဒ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင် အမိန့်တော်ခံယူ
Mohamed Rahin | June 30, 2020
အိန္ဒိယနိင်ငံ တမလ်နာယူပြည်နယ်မှ အူရ်ဒူ အရ်ဗီ အကျော်အမော်ပညာရှင်မော်လာနာ ဒေါက်တာ နေစာရ် အဟ်မဒ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင် အမိန့်တော်ခံယူ انّالله وانّاالیه راجعون အိန္ဒိယနိင်ငံရှီ တမလ်နာယူပြည်နယ်မှ အူရ်ဒူ အရ်ဗီ အကျော်အမော်ပညာရှင်မော်လာနာ ဒေါက်တာ နေစာရ် အဟ်မဒ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင် အမိန့်တော်ခံယူသွားပါသဖြင့် မဂ်ဖွေရသ်အတွက်အထူးဒိုအာပြုပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ အိန္ဒိယနိင်ငံရှီ တမလ်နာယူပြည်နယ်မှ အူရ်ဒူ အရ်ဗီ
ပါကိစ္စတန် ဆွဖ်တောင်တန်းရွာမှာ ဆင်းရဲသား ၆၀၀ကျော်ကို ကုသပေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ Usama Raiz ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံး
Mohamed Rahin | June 28, 2020
ပါကိစ္စတန် ဆွဖ်တောင်တန်းရွာမှာ ဆင်းရဲသား ၆၀၀ကျော်ကို ကုသပေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ Usama Raiz ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံး إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ပါကိစ္စတန် ဆွဖ်တောင်တန်းရွာမှာ ဆင်းရဲသား ၆၀၀ကျော်ကို ကုသပေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ Usama Raiz ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးကွယ်ကွန်ခဲ့သည်။ အသက် ၂၈သာရှိတဲ့ လူမူဝန်ထမ်းတာဝန်ယူပြီးသူဆင်းရဲလူနာကို
တူရကီနိုင်ငံ Kirsehir မြို့တွင်ရှိသော အလွန်လှပတင့်တယ်ပြီးကျက်သရေရှိသော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်
နမာဇ်ဝတ်ပြုပြီးတိုင်း ( ၇ )ကြိမ်ဖတ်ပာ
အိန္ဒယက ရှာဟီးဒီ သုံးဦးရဲ့နောက်ဆုံးခရီး
တနေ့တာရဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု့ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည်လန်းဆန်းသွားစေမည့် အမလ်
အိန္ဒိယနာမည်ကျော်ဆရာကြီး အလ္လာဟ်အသျှင့်မြတ်သခင်၏ အမိန့်တော်ခံယူ
Onlinemuslimbook is Isalmic news, book, knowledge,Feeling website. We provide you with the latest breaking news stories everyday.
Articles are displayed in text, video and photo. Visitors can read news in articles type of categories in https://onlinemuslimbook.website(example – News, Knowledge, book….etc).
© 2020 Muslim Book.